Nagu soo biir inta aan u soconno si aan u dhameyno gaajada! - Cuntooyinka giraangiraha
Nagala soo qaybgal annaga oo u soconna sidii loo joojin lahaa Gaajada!
Ku soo biir Cuntada Taayirada sida aan ugu soconno Dhammaadka Gaajada Thanksgiving-kan! Socodka Dhammaadka Gaajada waa socod qoys oo saaxiibtinimo ah oo ka socda Mall of America oo ka dhacaya subaxa Thanksgiving. Munaasabadan ayaa kulmisay 13 hay'adood, Cuntooyinka Lugaha la dhigto oo iyaga ka mid ah, dhammaantoodna ujeedkoodu yahay in la joojiyo gaajada ka jirta gobolkeenna. Markaad doorato inaad ku lugeyso Cuntooyinka Lugaha Lugta leh dhammaan lacagta la uruuriyay waxay u kici doontaa inay taageerto gaarsiinta cuntada nafaqada leh, iyo rajada madaxbannaanida, waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah.
Socodka Dhammaadka Gaajada waa munaasabadda ugu fiican qoyska, oo dhowaan waxay noqon kartaa dhaqan cusub oo Thanksgiving ah! Ka dhig joogsigaaga ugu horreeya fasaxa Thanksgiving-ka inuu noqdo Mall of America, halkaas oo qoyskaaga ay waqti ku wada qaadan karaan iyagoo wax wada siinaya intaadan mahadcelinta gelin dambe ee maalinta. Waxa ku yaal goobo loo qoondeeyey “Fun Zones” oo ku dhex yaal suuqa weyn, sidaa darteed waxaad ka heli doontaa wax kaa madadaalin kara gees kasta. Socodku sidoo kale waa fursad weyn oo looga hadlo oo lagala kulmo muhiimada ay leedahay in dadka kale laga caawiyo qoyskaaga!
Siyaabaha Aad Isdiiwaangalin Karto
Ku soo biir kooxdayada! Qaadashada ugu horreysa oo ah $25 oo kaliya waxaad ku lugeyn kartaa Metro Meals on Wheels subaxda Thanksgiving.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan munaasabadda iyo diiwaangelinta Ku soco bogga internetka si aad u dhamaysato Gaajada. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno Maalinta Thanksgiving!